Banyere Anyị - Huaian ASN Medical technology Co., Ltd.
Ogwe aka PVC
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (2019-nCoV) Kit Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)
Bandeeji & Mkpọ
Orthopedic Nkedo teepu
Faiba glaasi Roll Splint
Self nrapado bandeeji
Teepu ụlọ ọrụ
Mpụga Mgbazi Mpụga
Kemeghi ikiaka nkwado
Mkpịsị ụkwụ Ankle-Foot Orthosis
Thoracolumbar emem nkwado
na-asa ákwà Magnesium
anyị bụ ndị a otutu emeputa nke ipuiche ngwaahịa 'nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa. Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. e guzobere na 2012. Kemgbe e guzobere ya, ọ na-akwado mahadum na kọleji iji rụpụta ihe teknụzụ na ngalaba plastik orthopedic site na njikọta nke mmepụta, ọmụmụ na nyocha.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ịgbalịsi ike na-agba mbọ, Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. ugbu a ghọrọ onye na-emepụta klaasị mbụ nke teepu Orthopedic na splints na mba ahụ. Anyị mgbe niile rube isi na iwu nke akpachapụ anya imewe, kpachara anya mmepụta, ịnụ ọkụ n'obi ọrụ, na-agbalịsi maka nke mbụ na klas, na-akwalite mmepe na technology. Anyị na-agbasochi echiche azụmaahịa nke ezi obi na ntụkwasị obi, ma merie mmeri n'etiti onye ọbịa na onye ahịa ahụ. Anyị na-eleba anya dị ka ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ma weghachite ọha mmadụ na ngwaahịa dị elu na ọnụ ala dị ala.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ikikere 15 nke onwe ya ma kwupụta maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba.
Anyị nwere asambodo sistemụ ISO 13485, asambodo EU CE, asambodo US FDA ma sonye n'ọtụtụ nnukwu azụmaahịa n'ụlọ na mba ofesi kwa afọ.
Companylọ ọrụ anyị na-arụpụta ngwaahịa dị iche iche dịka teepu nkedo orthopedic, teepu mmezi, na paịpụ mmanụ ụgbọ mmiri. Anyị na-ebubata akụrụngwa na akụrụngwa ma mepụtara ngwaahịa ọhụrụ. A na-ebupụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ karịa mba 20 gụnyere United States, Canada, Germany, Britain, Italy, Egypt na India. N'ihe banyere ọrụ ngwaahịa, e guzobere otu ndị ọrụ na-ere ahịa mgbe achụsịrị iji belata nchegbu nke ndị ahịa. N'okporo ụzọ nke mmepe n'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke ịnye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, mezue ngwaahịa na ọrụ ha, na ịkwụghachi ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.
Ihe ngosi ohuru
Anyị esonyela n'ọtụtụ mba ngosi. Nwere ike ịlele ozi nke ngosi anyị kere na tupu.
Adreesị: Ogige Ugbo, 16zọ 16 nke Feiyao, Huai 'an, Jiangsu